Maitiro ekurapa kubatwa febrile - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Zvipfuwo Nhau Zvinodhaka Info Hutano Dzidzo, Hutano Kambani, Hutano Dzidzo Wellness Dhinda Nharaunda, Kambani Checkout Nhau, Wellness Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Info Info, Nhau Dzidzo Yehutano Kambani
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Maitiro ekurapa febrile pfari
Maitiro ekurapa febrile pfari
Ndakanga ndichiyamwisa fivha yangu yemwedzi gumi nematanhatu, paakamira kudya uye airatidzika kunge akatarisa zvakanyanya nepahwindo. Pakutanga, ndaifunga kuti akaona chimwe chinhu chinonakidza, asi ndakazoona kuti handikwanise kutyora maziso ake. Haana kupindura kuzita rake kana kukanganiswa. Paakatanga kuita ruzha rusingazivikanwe uye kumedzera mate, ndakaziva kuti chimwe chinhu chakange chisina kumira zvakanaka.
Nekuti ini ndakange ndashanda muchengeti yezuva nevana vakati wandei vane nhoroondo yekubatwa nepfari, ndaiziva kuziva imwe, uye zvekuita. Kuva neruzivo urwu kwakandibatsira kuramba ndakadzikama panguva yechiitiko ichi chinotyisa.
Neraki, sekutyisa sezvavanotarisa, kubatwa kwechikanganiso hakuwanzo kuve nenjodzi uye kazhinji, vana vanokunda. Mwanakomana wangu ava nemakore gumi nerimwe ekuberekwa, asingabatwe nepfuti, uye haana kana mhedzisiro inogara kubva mukubatwa neshamhu kwaakaita achiri mudiki. Hezvino izvo zvaunoda kuti uzive pamusoro pavo.
Chii chinonzi kubatwa febrile?
Kukanganiswa kwepabrile (kunodaidzwa kunzi kushushikana febrile) ndiko kunowanzoitika pakubatwa kwevana vachiri vadiki. Saizvozvo, 2% kusvika 5% yevana vane makore matanhatu kusvika pamakore mashanu vanoona kubatwa zvisina kufanira. Iwo anowanzo kuve mapfupi mukureba, kazhinji anogara isingasviki maminetsi maviri kana maviri , uye kashoma kudarika maminitsi mashanu. Kune marudzi maviri ekubatwa febrile. Nyore febrile pfari ndiyo yakajairika, uye inopera isingasviki maminetsi gumi nemashanu. Kumhanyisa febrile kubatwa ndiko kunogara kwenguva inopfuura maminetsi gumi nemashanu, kunodzokororwa mukati memaawa makumi maviri nemana, kana kuve nezvakadai senge focal kutanga .
Chii chinokonzeresa kutadza kufema?
Kukanganiswa kwepabrile kunoitika kana mwana aine fivha. Kunyangwe zvichikwanisika kuitika nefivhiri yepasi (100.4 degrees F), zvinowanzoitika kana tembiricha yemwana iri pamusoro kupfuura 102 degrees F. Zvinogona zvakare kusangana nekushanduka kuri kuita tembiricha yemuviri - kazhinji, iyo iri kukwira nekukurumidza, asi nguva nenguva apo fivha yemwana iri kudonha.
Kukanganiswa kwepabrile kunogona kuitika nechero chirwere uye kuitike pazuva rekutanga refivha. Zvimwe zvirwere zvinowanzobatanidzwa nekubatwa febrile zvinosanganisira dzihwa, dzihwa, roseola, pneumonia, uye meningitis.
Sei fivha inotungamira mukugumburwa mune vamwe vana vadiki? Hazvizivikanwe, anodaro Maryanne Tranter, Ph.D., APN, muvambi we Hutano Hwana Concierge . Asi fivha inoshandura mashandiro ehuropi uye kemesitiri. Izvi zvinokanganisa uropi neuron kupfura uye kunakidzwa, uko kunotungamira mukubatwa. Genetics inokanganisa nzira idzi. Zvinokonzera zvakatipoteredza zvinotendwawo kuti zvinobatanidzwa. Zvinoreva, nhoroondo yemhuri yekubatwa febrile inogona kuratidza njodzi yakakwira.
Ndiani ari panjodzi yekubatwa febrile?
Chero vana vari pakati pemwedzi mitanhatu nemakore mashanu ekuberekwa vanogona kubatwa nepfrile, kazhinji pakati pemwedzi gumi nemana kusvika gumi nesere ekuberekwa. Zvinoitika zvakanyanya muvakomana kupfuura mune vasikana uye vane hushoma tsika yekugara nhaka.
kudzikisira BP yako kumba
Inenge chikamu chimwe muzvitatu chevana vakagumburwa kamwe chete vanowana imwe kana imwe chete panguva yehudiki hwavo.
Ndezvipi zviratidzo zvekutora febrile?
Zviratidzo zvinogona kusanganisira kupisa muviri pamwe chete kana chimwe chete pane zvinotevera:
Jerking kune rimwe kana mativi ese
Kusunga kwemhasuru kune rimwe kana mativi ese
Kukamhina kwemhasuru kune rimwe kana mativi ese
Anopupira furo pamuromo
Pale kana bhuruu ganda
Kutora febrile kunotora nguva yakareba sei?
Kungoerekana wabatwa nehope kunowanzotora maminitsi mashoma — maminitsi mashanu kana kuti mashoma. Dzimwe nguva vanopedza anopfuura maminitsi mashanu uye zvisingawanzo kupfuura maminetsi gumi neshanu. Kukanganiswa kwefebrile kwakaomarara kunogona kutora anopfuura maminetsi gumi neshanu uye kunogona kuitika kanopfuura kamwe mumaawa makumi maviri nemana.
Kubatwa febrile kubatwa kunoonekwa sei?
Nekubatwa febrile kuri nyore, vatapi vezvehutano vanoisa pfungwa pachirwere ndicho chinokonzera fivhiri. Vanogona kumhanyisa bvunzo dzeropa, kuita maX-ray, kana kushandisa mamwe maturu ekuongorora hutachiona kana hutachiona hunokonzeresa kurwara kwemwana.
Kune yakaoma febrile kubatwa, vanogona kuraira iyo EEG yemwana uye / kana kutumira kutumira kune nyanzvi senge neurologist.
Kana mumwe munhu aripo, zvinobatsira kana vakanyora kubatwa, anodaro Uchenna L. Umeh, MD, aka Dr. Lulu ve Dr. Lulu's Health Center muSan Antonio, Texas. Iyi vhidhiyo inobvumidza chiremba kuti aone kubatwa uye kuti aite zvakanyatso kuongororwa kupfuura kutsanangurwa kwemuromo.
Zvaunofanira kuita kana mwana achinge achibatwa febrile
Chekutanga uye chakakosha, zvakakosha kuti iwe ugare wakadzikama. Hezvino zvimwe zvaunofanira kuita kuti uve nechokwadi chekuti mwana wako anogara akachengeteka.
chii chandinorapa chandinogona kutora nhumbu
Radzika mwana padivi pake kana pasi uye bvisa chero zvinhu zviri padyo.
Usaise chero chinhu mumuromo wemwana, kusanganisira minwe yako. Hazvigoneke kuti munhu ane pfari amedze rurimi rwake.
Usaedze kudzora mwana.
Bvisa chero chipfeko chakasimba, kunyanya kutenderedza mutsipa.
Nguva iyo nguva yekutora.
Fonera 911 kana paine zvinotevera zvinotevera:
Kubatwa kunotora kupfuura maminitsi mashanu.
Kubatwa kunokanganisa divi rimwe chete.
Mwana ari kutadza kufema kana kushanduka bhuruu.
Mwana ane pfari dzakawanda.
Kune kurutsa kunoperekedza kubatwa.
Mwana ane mutsipa wakaomarara.
Kana iwe uchinzwa zvichidikanwa.
Mwana ane hope dzakanyanyisa
Kana usina chokwadi kana uchifanira kufona, fona - kunyanya kana uku kuri kwekutanga kubatwa kwefebrile kwemwana.
Kana kubatwa kwapfuura, simbisa, nyaradza, uye tarisa mwana wako. Anogona kunzwa kukotsira kana kuvhiringidzika mushure mekubatwa, asi anofanirwa kunge achiita zvakajairika mukati meawa.
Tevere, ita musangano nachiremba wevana. Izvi zvakakosha kwete chete nekuda kwekubatwa, asi kuongorora uye kurapa chirwere chakakonzera icho.
Febrile kubatwa kurapwa
Kazhinji, kubatwa febrile hakudi kurapwa kunze kwekurwara kwakadzika kunovaperekedza. Dzimwe nguva diazepam gel inoshandiswa kurapa kudzokororazve kwefebrile pfari. Kana kubatwa kwakaoma, benzodiazepine senge Midazolam inogona kupihwa neve emergency emergency staff, asi izvi hazviwanzo.
RELATED: Vanhu vane pfari ikozvino vane nasal spray sarudzo yekurapa nekukurumidza kubata kurapwa
Kubatwa febrile kune njodzi here?
Nekuda kwekuti anotaridzika-anotyisa, vabereki kazhinji vanonetseka kuti kubatwa febrile kunogona kukurumidza kukuvadza kana kukonzera mhedzisiro inogara, kukuvara kwehuropi kwakadai. Nhau dzakanaka ndedzekuti kubatwa kwefebrile kunowanzo kuve kusingakuvadzi.
Kukanganiswa kwepabrile hakukonzere pfari . Mushure mekubatwa febrile, njodzi yemwana yekuvandudza chirwere chekubata inokwira kusvika 2% kusvika 4% , iyo iri pamusoro zvishoma kupfuura avhareji; asi kuwirirana, kwete chikonzero.
Kubata kwenguva refu kunotora nguva inopfuura mashanu kusvika gumi nemashanu kunogona kukonzera njodzi yekuwedzera pfari, asi izvo hazviwanzoitika. Chero rudzi rwechiitiko chinokonzeresa chine njodzi, anodaro Dr. Umeh. Iyo yakareba kwenguva yakareba, inotyisa. Asi kubatwa febrile kazhinji hakutore nguva yakareba.
Vana vangangoita nguva dzese vanopaza febrile kubatwa nezera remakore mashanu kana matanhatu.
Kubatwa febrile kungadzivirirwa here?
Nepo vanachiremba dzimwe nguva vachikurudzira kushandisa zvinoderedza fivha senge ibuprofen uye acetaminophen senzira dzekudzivirira kubatwa zvisina kufanira, pane humbowo hushoma hwesainzi kuratidza kuti hunoshanda pachinangwa icho. Kushandisa mishonga yakadai seacetaminophen kana ibuprofen yefivha yakaratidzirwa kakawanda kuti haidziviriri pfari, anodaro Dr. Tranter. Ivo vanoshanda pa kuderedza kupisa , izvo zvinogona kubatsira mwana wako kuti anzwe kugadzikana. Kutevera chirongwa chekurapa kubva kuna chiremba wemwana wako kuchabatsira kupora, zvichideredza njodzi yekubatwazve nechirwere chazvino.
Nzira yakanakisa yekudzivirira kubatwa febrile ndeye kudzivirira zvirwere pakutanga . Kugeza maoko, kuvhara miromo nezvikosoro, kuwana nguva yakakwana yekurara kuitira kuti immune immune isimbe, uye kuwana jekiseni rechirwere, iro rinogona kudzivirira furuwenza kana kudzikisira kuomarara kwezviratidzo kana iwe ukawana furuwenza mamwe matanho Dr. Tranter anoratidza kudzikisira kubata uye kuparadzira zvirwere izvo zvinogona kutungamira mukubatwa febrile.
Hazvitomborwadzi kugadzirira. Kuziva zviratidzo zvekutora febrile uye zvaunofanira kuita kana mwana wako aine imwe hakutadzise imwe. Asi, dzidziso yekutanga yekubatsira inobatsira kuti vabereki vadzikame uye inosimudzira mhinduro nekukurumidza uye chaiyo.
Vanochengeta vanogona kutora cardiopulmonary resuscitation kirasi, iyo inogona kubatsira kudzikisa kutya kwavo uye kushushikana kana zvikaitika zvakare, anodaro Dr. Tranter.
Kukanganiswa kwepamusoro kunoratidzika kunotyisa-asi kana mwana wako ane imwe, edza kusazvidya mwoyo. Ivo vanenge vanogara vasina kukuvadza, uye vanozvigadzirisa vega.
Allegra vs. Claritin: Misiyano, kufanana, uye ndeipi iri nani kwauri
inobviswa vs copay vs kubuda muhomwe
chii pamusoro pemushonga wekubatsira chakanakira kuzara kwechifuva
inogona motrin uye tylenol kutorwa pamwechete
chakanakira chinhu chakazara mhino uye huro huro
pamusoro pekambani yemishonga yekurapa uye musoro
ndinogona kutora allegra uye benadryl panguva imwe chete